Wallström: ”Waa argagax iyo dhacdo aan la aqbali karin” - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Wallström oo ka faalootay ereyadii Netanyahu uu maanta kaga dhawaaqay magaalada Brugsel.. sawir: Emmanuel Dunand/TT och Pontus Lundahl/TT
Wallström: ”Waa argagax iyo dhacdo aan la aqbali karin”
"Sida ey noola muuqato Qudus waa caasimadda laba waddan"
La cusbooneeyay måndag 11 december 2017 kl 14.54
La daabacay måndag 11 december 2017 kl 14.36
Waxaa weli halkoodii ka sii socday doodihii la xiriirey aqoonsigii ay dawladda Mareeykanku ku dhawaaqday maqaamka magaalada Qudus (Jerusalaam) inay tahay caasimadda dalka Israa’iil.
Hoggaamiyaha dawladda Israa’iil Benjamin Netanyahu ayaa maanta kulan kula qaatay magaalada Barugsel wasiirrada arrimmaha dibadda EU. Wuxuuna rajeeynayaa iney waddammo kale oo Yurub ah u soo rari doonaan diblamaasiyiintooda magaalada Qudus (Jerusalaam).
Sida uu sheegay Netanyahu iney sidoo kale jiraan rajooyin ah iney waddammo kale u aqoon-san doonaan magaalada Qudus (Jerusalaam) inay tahay caasimadda dalka Israa’iil.
Hase yeeshee kulankaa dabadii waxay shaaca ka qaaday wasiirka arimmaha dibadda Sweden Margot Wallström in aanay xaaladdani ahayn mid miiska u saaran Sweden iyo waddammada xubnaha ka ah EU.
–Iima muuqdaan waddammo ku tallaab-san lahaa, u maleeyn maayo iney waddammo xubno ka ah EU ficilkaa ku tallaab-san doonaan. Waxaannu ku taagannahey mowqifkayagii ku wajahnaa magaalada Qudus (Jerusalaam) iyo inay tahay caasimad laba waddan. Waa laba fahan oo kala duwan, weyna jiraan, sida ay sheegtay Wallström.
Margot Wallström waxay sidoo kale ka faallootay dhaleecooyinkii iyada iyo madaxa dawladda Sweden Stefan Löfven u soo jeediyay guddiga yuhuudda Mareeykanka iyo in aan la gar-waaqsan xaaladda cakiran ee neceeybka yuhuudda ee dalka Sweden ka aloosan qaasatan weearkii dhowaantan lagu qaaday sinagoog ku yaala magaalada Göteborg.
–Xaqiiqdii, muddo sanooyin ah ayay wada-hadallo noocani ah noo socdeen ururrada yuhuudda. Waa wax soo noqnoqda, waxaannu ka wada xaajoonney iskuullada sidii howlo dheeri ah looga qaban lahaa iyo sidoo kale sida ciidankanka ammaanka iyo nabad-sugiddu gacan dheeri ah uga geey-san lahaayeen. Hase yeeshee waxay ila tahay in loo baahan yahay sidii sidoo kale waddammo Yurub ku yaala wax-qabadka arrinkaa loo dardar gelin lahaa.
-Waa dhacdo halis noola muuqata. Waayo inta uu dalka Sweden ku nool yahay shakhsi yuhuud ah oo dareemaya in aanu oran karin inuu yuhuud ama yuhuudiyad tahay waxaa weli na hor yaala howlo hor leh. Waa fal argagax oo aan la qaadan karin, sida ay sheegtay Wallström oo u warrameeysay laanta wararka Ekot.
Wararka: Trump oo ku talo jira safaaraddiisa inuu u raro Jerusalaam